नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार आजको ओरालो यात्रापछि नेप्से दुई हजार ८१२.३८ मा ओर्लिएको छ । झण्डै तीन हजार ३०० बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक पछिल्ला दिनमा लगातार घट्दै जाँदा दुई हजार ८०० बिन्दुमा झरेको हो ।
यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १२.७३ अङ्कले घटेर ५२५.७८ मा सीमित भएको छ ।
नेप्से ओरालो लागे पनि कारोबार रकम भने बुधबारको तुलनामा केही बढेको छ । बुधबार कारोबार रकम रु पाँच अर्बको हाराहारीमा थियो । आज कूल २२२ कम्पनीको एक करोड ६४ लाख ६८ हजार ५०८ कित्ता सेयर रु नौ अर्ब तीन करोड ३९ लाख ६२३ मा कारोबार भयो ।
#नेप्से #धितोपत्र_बजार #शेयर_कारोबार #नेपाल_स्टक_एक्सचेञ्ज
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३१, २०७८ १६:४९
बुधबार, कात्तिक ३, २०७८ ११:५७ शैक्षिक परामर्श व्यवसाय: मर्यादितबन्नेकि बनाउन पर्ने ?
शैक्षिक परामर्श व्यवसाय: मर्यादितबन्नेकि बनाउन पर्ने ?
शैक्षिक परामर्श व्यवसाय: मर्यादितबन्नेकि बनाउन पर्ने ? सन्तोष प्याकुरेल